Ukuthandwa kwe-saber kwakuphakeme ngekhulu leshumi nesikhombisa. Kuze kube namuhla, lesi sitshalo sisetshenziselwa kabanzi ngezinhloso ezihlukahlukene emhlabeni jikelele. Futhi uyayibona njengemithi yendabuko, engeyona yendabuko. I-tincture ye- saber, okufake isicelo sayo sinqobile ukuqiniseka kwabantu abaningi, kubalwa yiqiniso lokuthi linomthwalo omkhulu wezokwelapha. Lesi sitshalo i-biostimulator engavumelekile. Lokhu kuchazwa ngokubunjwa kwalo okuyingqayizivele - i-phosphorus, i-potassium, ithusi, i-magnesium nenani elikhulu lamavithamini. Kodwa-ke, ukwakhiwa kwamakhemikhali wesitshalo akuzange kufundwe ngokugcwele kuze kube yimanje. Kuyaziwa ngokuqinisekile ukuthi i-sabelnik icebile kuma-acids ahlukahlukene, i-provitamin A, i-vitamin C, i-tannins namafutha abalulekile.
Emithi yokwelapha, lesi sitshalo sisetshenziswa ngokuphumelelayo ukuphatha i-arthritis ye-rheumatoid, i-osteochondrosis, isifo sofuba samalungu kanye ne-gout. Ukuphumelela kwe-saber kuchazwa ukuthi iqukethe inani elikhulu lama-tannin, libhubhisa ngokuphelele amabhaktheriya, lisindisa ebuhlungwini, lisuse usawoti, lisuse ukuvuvukala futhi kubuyiselwe amaseli.
I-Tincture ye-saber. Isicelo nokuqapha
Ukuhlukanisa lesi sitshalo kulula ukuyilungisa ekhaya. Ukwenza lokhu, thatha isipuni sesotshani esomile ngokucophelela, impande ne-rhizome ye-saber. Konke lokhu kuthule amanzi (cishe amamitha ayizigidi eziyi-100) futhi ulethe ngamathumba. Ubuningi obangelwayo kufanele buphekwe ekushiseni okuphansi okungenani imizuzu eyishumi nanhlanu. Ngemuva kwalesi sikhathi, umhluzi kufanele ucolile futhi uhlungwe ngokusebenzisa i-gauze noma i-sieve. Umkhiqizo ophumela kuhlanjululwe ngamanzi kuya kuma-milliliters angu-250. Thatha kathathu ngosuku okwesithathu kwengilazi. I-tincture ye-saber, okulungiselelwa okungadingi ukuzikhandla okukhulu, iboniswa kubantu abane-gout, i-radiculitis ne-osteochondrosis.
Ngezinhlungu ezinamandla ezibukhali nokuvuvukala kokubambisana, usizo lwe-poultices. Njengoba izimpawu ezinjengokubomvu, ukuvuvukala, ukwanda kwamazinga okushisa kwendawo, izitshalo ezivela kulo mkhakha zizosiza. Ukulungiselela kwabo kuyadingeka ukuthululela izipuni ezimbili zezinto eziluhlaza okomile ngamanzi amakhulu abilayo bese uvumela ukuma okungenani imizuzu emihlanu. Umswakama obangelwayo kufanele uhlanganiswe ngendwangu yesikhumba esenziwe ngezicubu zemvelo futhi isetshenziselwa njalo endaweni enzima. Le nqubo izosiza ukuqeda i-radiculitis, i-gout kanye ne-arthritis ye-rheumatoid.
Khumbula ukuthi ukusetshenziswa kwalolu thuluzi ekulwa nezifo zesimiso se-musculoskelet kufanele kwenziwe ngemuva kokubonisana nodokotela.
Ukuphazamiseka nokusetshenziswa kwalesi sidakamizwa kunganciphisa wonke umphumela wokwelapha ku-zero. Yingakho i-tincture ye-saber, okusetshenziselwa ukukhulula izifo eziningi, kufanele ilungiselelwe futhi yamukelwe ngokuhambisana nemithi kadokotela. Phakathi nenkambo yokwelashwa kunconywa ukuzivikela emakhazeni ahlukahlukene. Kubalulekile ukunamathela ekudleni okukhethekile. Awukwazi ukusebenzisa okulandelayo:
- imikhiqizo yobisi,
- usawoti, okubabayo, ukubhema, omuncu,
- inyama nomhluzi,
Kuyinto engathandeki ukusebenzisa le nqubo kubantu ababhekene nezifo zezinso nesibindi, njengoba isimo sabo singashuba kakhulu. Akukhuthazwa ukusebenzisa ezinye imikhiqizo yokwelapha uma i-tincture ye-saber isetshenzisiwe. "Evalar" inkampani yezokwelapha eyenza lo mkhiqizo efomu elungele ukusetshenziswa. Ngakho-ke, ungagcina isikhathi ekulungiseleleni, uma ungenayo.
I-tincture ye-sabelnik, ukusetshenziswa kwayo okuphumelelayo ekwelapheni izifo eziningi, kusiza ukunciphisa ukulinganisa kwezidakamizwa ezingekho-steroidal ezilwa nokuvuvukala. Kwezinye izimo, ukwamukelwa kwabo kungakhanselwa ngokuphelele.
Employment: kanjani ukuphendula imibuzo ngezinye interview kahle